Hlola iFrance - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili eziphezulu eFrance
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeFrance
Bukela ividiyo ekhuluma ngeFrance
IFrance yizwe lapho cishe sonke isihambi sinobudlelwano. Amaphupho amaningi nge-joie de vivre yawo akhonjiswa izindawo zokudlela ezingenakubalwa, amadolobhana amahle kanye nama-gastronomy adume umhlaba. Abanye beza belandela umkhondo wezazi zefilosofi ezinkulu zaseFrance, ababhali kanye nabadwebi, noma ukuthi bacwilise olimini oluhle olunikeze umhlaba. Futhi ezinye zisadonswa ekungafanini kwezwe kwendawo enamaphethelo ayo amade, izintaba ezinkulu zezintaba kanye nama-vistas amnandi asepulazini. Hlola iFrance ukuze uthandane nayo.
IFrance ibiyindawo ethandwa kakhulu izivakashi emhlabeni isikhathi eside. Ithole izivakashi eziyizigidi eziyi-83.7 e2014. IFrance ingelinye lamazwe ahlukahlukana ngokwendawo eYurophu, enezindawo ezihlukile komunye nomunye njenge-chic yasemadolobheni Paris, ilanga I-French Riviera, amabhishi amade we-Atlantic, izindawo zokuphumula zemidlalo zasebusika ze-French Alps, izinqaba zesigodi saseLoire, uCeltic Brittany nephupho lomlobi onguNormandy.
IFrance iyizwe elinemizwa ecebile kepha futhi iyindawo yokucabanga okunengqondo kanye namagugu okukhanya. Ngaphezu kwakho konke, yaziwa ngokudla, isiko nomlando wayo.
IFrance inezinhlobonhlobo eziningi, kepha ubusika obufudumele namahlobo ashubile kule ndawo, futhi ikakhulukazi eParis. Ubusika obufudumele kanye nehlobo elishisayo ngaseMedithera nasentshonalanga eseningizimu (eyedlule inemvula eningi ebusika). Ungase ubone ngisho nezihlahla ezimbalwa zesundu ogwini lweMedithera. Ubusika obuthambile (elinemvula eningi) kanye nehlobo elipholile enyakatho-ntshonalanga (iBrittany). Ipholile ebusika ebandayo nehlobo elishisayo emngceleni waseJalimane (Alsace). Eduze nesiGodi saseRhône, kunomoya ovunguzayo ngezikhathi ezithile, obandayo, owomile, osenyakatho nentshonalanga owaziwa ngokuthi umoya Mistral. Ubusika obubandayo bunamaqhwa amaningi ezifundeni zasezintabeni: Alps, Pyrenees, Auvergne.
Inamathafa asicaba kakhulu noma amagquma ahamba kahle ngobumnene enyakatho nasentshonalanga; okuseleyo kuyizintaba, ikakhulukazi amaPyrenees eningizimu nentshonalanga, amaVosges, iJura kanye ne-Alps empumalanga, Massif Central maphakathi nenyakatho.
Uma kungenzeka, zama ukugwema amaholide esikole saseFrance nePhasika, ngoba amahhotela angabhalwa ngokweqile futhi ukugcwala emigwaqweni kumbi kakhulu.
Amahhotela kungenzeka ukuthi afakwe ngaphezulu kwe-1 Meyi, i-8 Meyi, i-11 Nov, i-Easter Weekend, nangempelasonto ye-Ascension.
IFrance ibilokhu inabantu abaningi kusukela ngesikhathi seNeolithic. Isifunda saseDordogne sicebile ikakhulukazi emihumeni ye-prehistoric, eminye isetshenziswa njengendawo yokuhlala; amanye ayithempeli elinemidwebo emangalisayo yezilwane nabazingeli, njengaleyo etholakala I-Lasinkatha, kanti ezinye zimangalisa ngokwakheka komhlaba okumangalisayo, njenge-gondola-navigable Gouffre de Padirac.
Umlando Obhaliwe waqala eFrance ngokuhlaselwa kwendawo ngamaRoma, phakathi kwe118 ne50 BC. Kusukela lapho, insimu namuhla ebizwa ngokuthi iFrance yayiyingxenye yoMbuso WaseRoma, kwathi amaGauls (igama elinikezwe amaCelt endawo ngamaRoma), ayehlala lapho ngaphambi kokuhlaselwa amaRoma, aba “Gallo-Roma” oshaqisayo.
Amagama wobukhona bamaRoma asabonakala, ikakhulukazi engxenyeni eseningizimu yezwe lapho amasekhethi amaRoma asasetshenziselwa izinkabi zamadwala namatshe nama-roll. Eminye yemigwaqo emikhulu isalandela imigudu eyaqala eminyakeni ye-2,000 eyedlule, futhi nenhlangano yasemadolobheni yezikhungo eziningi zedolobha ezindala isabhala cardo futhi i-decumanus yekamu langaphambili lamaRoma (ikakhulukazi iParis). Elinye ifa eliyinhloko kwakuyiSonto lamaKatolika elingabhekwa njengokuwukuphela kwensali yempucuko yalesosikhathi.
IFrance inamadolobha amaningi athakazelayo kubahambi, okuphawuleka kakhulu:
Paris - "Idolobha Lokukhanya", ezothando ne-Eiffel Tower
Bordeaux - Idolobha lewayini, izindlu zamatshe zendabuko kanye nemathafa ahlakaniphile
IBourges - izingadi, imisele kanye nesonto lesonto elikhulu kubhalwe phansi njengendawo yamagugu e-UNESCO
Lille- idolobha elisenyakatho elinamandla elaziwa ngesikhungo salo esihle nokuphila kwamasiko asebenzayo
Lyon - Idolobha lesibili laseFrance elinomlando kusuka ezikhathini zamaRoma kuya eResistance
eMarseilles - Idolobha lesithathu ngobukhulu laseFrance elinetheku elikhulu njengendawo yalo njengenhliziyo yeProvence
Nantes - "iGreenest City" futhi, ngokusho kwabanye, indawo enhle kakhulu yokuhlala eYurophu
Strasbourg - edumile ngesikhungo sayo somlando, nekhaya ezikhungweni eziningi zaseYurophu
Toulouse - "I-Pink City", ngokwakhiwa kwayo okuhlukile kwezitini, idolobha elikhulu lase-Occitania
ICamargue - enye yezindawo zokudabula imifula nemifula yaseYurophu
I-Corsica - indawo azalelwa kuyo uNapoleon, isiqhingi esiyingqayizivele esinamasiko nolimi oluhlukile
Disneyland Paris - ukuheha okuvakasheleke kakhulu eYurophu
I-French Alps - ikhaya eliyintaba ephakeme kakhulu eNtshonalanga Yurophu, iMont Blanc
I-French Riviera (I-French Riviera) - Ugu lwaseMedithera lwaseFrance olunezindawo eziningi zokuphumula zasolwandle ezisendaweni ephakeme, ama-yachts nezifundo zegalofu
ILoire Valley - isigodi esidume umhlaba wonke iLoire Valley, aziwa kakhulu ngama-vin ayo ne-chateaux
ILuberon - Provence eyingqayizivele yamadolobhana amahle, Joie de vivrenewayini
IMont Saint Michel - indawo yesibili evakashelwa kakhulu eFrance, isigodlo sezindela nedolobha elakhiwe edwaleni elincane lesanti esihlabathini, elinqunywe ezweni elingasondeli phezulu
IVerdon Gorge - umgede omuhle womfula endaweni eluhlaza eluhlaza okwesibhakabhaka, enhle ngokuhamba ngezinyawo, ukugibela izintaba, ukugibela amatshe noma ukushayela nje emadwaleni
Ukuvunyelwa okuncane kwemibhalo yokuvakasha
I-EU, i-EEA kanye nezakhamizi zaseSwitzerland zidinga kuphela ukuthi zibe nomazisi kazwelonke noma ipasipoti evumelekile konke ukuhlala kwabo eFrance.
Abanye abantu besizwe (kungakhathalekile ukuthi bayazikhipha ku-visa noma bayadingeka ukuthi babe ne-visa) kumele babe nepasipoti enobunikazi benyanga yezinyanga eziyi-3 ngaphezulu kwesikhathi sabo sokuhlala eFrance. Ngaphezu kwalokho, ipasipoti kufanele ukuthi ikhishwe eminyakeni edlule ye-10.
IFrance iyilungu lesivumelwano seScgengen.
Izindiza eziya / zisuka eParis
Isikhumulo sezindiza esikhulu samazwe omhlaba, uRoissy - uCharles de Gaulle (CDG) kungenzeka kube yichweba lakho lokungena uma undizela eFrance usuka ngaphandle kwaseYurophu. I-CDG yikhaya le-Air France (AF), inkampani kazwelonke, yezindiza eziningi ezihamba ngezinyawo ezihamba phakathi.
Ezinye izindiza, zindiza esikhumulweni sezindiza iBeuvaisis esiseduzane ne80km enyakatho nentshonalanga yeParis.
Izindiza eziya / ezivela kwizikhumulo zezindiza zesifunda
Ezinye izikhumulo zezindiza ezingaphandle kweParis zinindiza eziya / zisuka emazweni aphesheya: iBordeaux, iClermont-Ferrand, iLille, iLyon, iMarseille, iNantes, iNice, iToulouse inezindiza eziya emadolobheni asentshonalanga yeYurophu naseNyakatho ne-Afrika; lezi zikhumulo zezindiza ziyizindawo zezikhumulo zezindiza ezincane eFrance futhi zingasiza ekugwemeni ukudluliselwa phakathi kwezikhumulo zezindiza ezimbili zaseParis. Izikhumulo zezindiza ezimbili, iBâle-Mulhouse neGeneva, zabiwe yiFrance neSwitzerland futhi zingavumela ukungena kulo naliphi izwe.
Uma ucabanga ngeFrance, ungafunga isithombe esihle se-Eiffel Tower, i-Arc de Triomphe noma ukumamatheka kuka-Mona Lisa. Ungafunga ukuphuza ikhofi ku-lively Paris amathofi lapho izazi ezinkulu zihlala khona ezikhathini ezidlule, noma ezidla izingwegwe endaweni yendawo yomuzi olele kodwa omuhle emaphandleni. Ngokunokwenzeka, izithombe ze-châteaux ebabazekayo zizokhunjulwa engqondweni yakho, yamasimu we-lavender noma mhlawumbe yezivini lapho iso lingabona khona. Noma mhlawumbe, ungacabanga izindawo zokungcebeleka ze-chic ze-Cote D'Azur. Futhi ubungeke ube okungalungile. Kodwa-ke, zingukuphela kwesiqalo se-iceberg uma kukhulunywa ngokubuka nokuheha okuningi kwaseFrance.
IFrance ingaphezu kwamadolobha.
Iningi lamaFrance lithatha amaholide alo ngo-Agasti. Ngenxa yalokhu, ngaphandle kwezindawo ezivakashelwa, izitolo eziningi ezincane (izitolo zabathengi, ama-bakeries…) zizovalwa ezingxenyeni zika-Agasti. Lokhu kuyasebenza ezinkampanini eziningi nakubodokotela. Ngokusobala, ezindaweni zabavakashi, izitolo zizothanda ukuvuleka lapho izivakashi zifika, ikakhulukazi ngoJulayi nango-Agasti. Ngokuphambene, izinto eziningi zizobe zigcwele kakhulu ngalezo zinyanga, nangesikhathi sokuphela kwesonto le-Easter.
Ezinye izinto ezihehayo, ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya, zivaliwe noma zinciphise amahora wokuvula ngaphandle kwesikhathi sokuvakasha.
Izindawo ezisezintabeni zivame ukuba nezinkathi ezimbili zokuvakasha: ebusika, ukushushuluza izikebhe, eminye imisebenzi ehambisana neqhwa, futhi ehlobo ukubona kahle nokuhamba ngezinyawo.
Ukubhema kwenqatshelwe ngumthetho kuzo zonke izindawo ezivalekile ezifinyeleleka emphakathini (lokhu kubandakanya izimoto zesitimela nezangaphansi komhlaba, ukufakwa eziteshini zesitimela, izindawo zokusebenza, izindawo zokudlela kanye namakhekhe) ngaphandle kokuthi ezindaweni ezisetshenziselwe ukubhema, futhi kukhona okumbalwa kwalokhu. Ukubhema kuvinjelwe kumametro nasezitimeleni, kanye naseziteshini ezivalekile. Abaqhubi bezitimela ezingaphansi kwezitimela nabasebenza ezitimeleni baphoqelela umthetho futhi bazokuhlawulisa ngokubhema ezindaweni ezingagcinwanga; uma uhlangabezana nezinkinga nomuntu obhemayo esitimeleni, ungahamba uyofuna umqhubi.
Njengoba amahhotela engathathwa njengezindawo zomphakathi, amanye anikela ngamakamelo okubhema kuwo.
Abantu abangaphezulu kweminyaka engu-18 kuphela abangathenga imikhiqizo kagwayi. Abathengi bangacela i-ID yesithombe.
Ungalokothi ushiye ifoni yakho etafuleni. Kubhekwa njengemikhuba emibi kakhulu.
Ungalokothi uphelelwe isineke ngabathengi ezindaweni zokudlela. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukulinda kungumsebenzi ohlonishwayo eFrance, futhi abantu kufanele benze uqeqesho oluningi ukuze babe yilowo nalowo. Awuphoqelekile ukuthi unikeze abalindi, kepha ungakwazi uma ufisa.
Ungalokothi ucele ukudla kwakho kuhlukaniswe izingxenye ezithile. EFrance, abantu balwela ukuletha okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu lapho kungenzeka khona, futhi ukucela ukuthi ukudla kwakho kuhlukaniswe kungabakhuba noma kubacasule abanye.
Ungalokothi uxoxe ngebhizinisi lapho udla ngaphandle. AmaFulentshi akakuthandi ukukhuluma ngomsebenzi nangebhizinisi lapho kudliwa, futhi sekuyisikhathi sokujabulela ukudla okuhle, newayini nengxoxo.
Ungalokothi udle ngaphandle kokuthi wonke umuntu acelwe ukuba enze kanjalo. Ukudla ngokushesha kubonakala njengokuxakile.
Hlola iFrance bese uthande ngayo.
IMont-Saint-Michel kanye ne-Bay yayo
Isigodlo nePaki yeVersailles
Izindawo ezi-Prehistoric kanye nezinkamba ezihlotshisiwe zesigodi saseVézère
IVézelay, iSonto kanye neNkomo
Izikhumbuzo Zase-Arles, ZaseRoma naseRoma
UCistercian Abbey waseFontenay
Isigodlo nePaki yeFontainebleau
Ithiyetha YaseRoma kanye Nezindawo Ezizungezile kanye “Nenqaba Yokunqoba” ye-Orange
Ukusuka kuma-Great saltworks weSaltins-les-Bain kuya eRoyal saltworks yase-Arc-et-Senans, i-Production of Open-pan Usawoti
Indawo Stanislas, Indawo ye-la Carrière ne-Place d'Ulumelo e-Nancy
I-Pont du Gard (i-Roman Aqueduct)
IStrasbourg, iGrande-Île kanye Neustadt
ISonto LaseNotre-Dame, Owayekade eyi-Abbey yaseSaint-Rémi neSigodlo saseTau, Reims
I-Paris, Amabhange Asolwandle
Isikhungo Somlando Se-Avignon: I-Papal Palace, i-Episcopal Ensemble ne-Avignon Bridge
I-Canal du Midi
Umlando Idolobha eliQinisekisiwe leCarcassonne
Isizinda Somlando saseLyon
Imizila yeSantiago de Compostela eFrance
Amabhande aseBelgium naseFrance
Isigodi saseLoire phakathi kweSully-sur-Loire neChalonnes
Izakhiwo, Idolobha Lama Fairs Wenkathi Ephakathi
ILe Havre, Idolobha Elakhiwa kabusha ngu-Auguste Perret
IBordeaux, ichweba leNyanga
Episcopal Idolobha lase-Albi
AmaCausses kanye neCrevennes, iMedical agro-pastoral Cultural Landscape
I-Nord-Pas de Calais Mining Basin
Umgede ohlotshisiwe wePont d'Arc, owaziwa ngeGrotte Chauvet-Pont d'Arc, e-Ardèche
I-Champagne Hillsides, Izindlu nama-Cellars
Umsebenzi Wezokwakha weLe Corbusier, Umnikelo Ovelele Enyakazeni Lanamuhla